Fanarenana ny Rova Nanazava ny efa natao i Mejamirado Razafimihary
Raharaha Kianja Masoandro Nametraka fitoriana maro sosona ny TIM
Nametraka fitoriana teny amin'ny filankevim-panjakàna eny anivon’ny Fitsarana tampony Anosy ny Antoko TIM notarihin’ny Sekretera Jeneraliny Rina Randriamasinoro omaly manoloana ny fananganana “colisée”
Siosion-dresaka diabe Tsara ambina ny Rova
Rakotra mpitandro filaminana niatrana am-bava basy tetsy anoloan’ny kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo ny sabotsy teo, ary tahaka izany ihany koa ny teny amin’ny manodidina ny Rovan’i Manjakamiadana.
Tarika Rakoto Frah Juniors “Tsy misy ho antenaina intsony ity taona ity”
Ny volana mey teo izahay no tokony nanainga hanao fitetezam-paritra tany Frantsa,
Rovan’Antananarivo Misy dikany avokoa ny singa rehetra ao
Miha lalina hatrany ny fanambarana momba ny rovan’Antananarivo izay mbola tsy mety matin’ireo mpisehatra momba ny vakoka lolo efa ho 1 volana izao. Ny taranak’Andrianonitompononitany,
Olana miisa 4 no nisy tamin’ny nanarenana ny lapan’i Manjakamiadana, hoy ny filohan’ny komitim-pirenena misahana ny vakoka, Mejamirado Razafimihary.
Teo ny olana ara- politika izay novahan’ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, ny 90%ny. Teo koa ny olana ara-bola izay tonga amin’ilay hoe vola fitady ny herim-po fanary. Ny olana ara-tekinika dia niarahana niasa tamin’ny injeniera sy mpahay taotrano ka afaka sahanina tsara koa iny. Ny olana nanahirana dia ny ara-drazana satria ireo Andriana sy Mainty tompon’ny tantara aza adino fa nandray anjara be dia be tamin’io tantaran’ny rova io. Nisy ny fizahana ny toerana na “Etude du sol”, raha ny mikasika ny hanarenana ny lapa, hoy izy. Tapaka fa tsy azo atsangana fotsiny amin’izao fa tsy maintsy hamafisina. Niisa 25 ny foto-kazo maranitra na “pieux” napetraka ao ambany ao izay nahatratra 60 santimetatra ka hatramin’ny 1 metatra ny iray fa 23 metatra kosa no halalin’ny nanatsatohana azy. Ny maha sarotra ny asa amin’izao, hoy izy, dia efa any amin’ny 80%n’ny asa any ho any no fahavitany. Ny tafajanona sisa dia ny paika hametrahana ny fenitra maha mozea azy na “museographie”. Isan’izany ny fanaingoana anatiny. Ny mety hanahirana dia ny fitadiavana sy fikajiana ny karazan-kazo mifanaraka amin’ny tantara. Nandiso ny filazana moa ity tompon'andraikitra ity fa nikasa ny hipetraka tao ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, tsy marina ary tena tsy mitombina izany,hoy izy. Tsy nisy na piesy iray azy aza, hoy izy, nafindra tao. Misy ambaratonga maro lalovina, hoy izy, na dia ny hametraka zavatra ao fotsiny aza.